यो हो ५ नम्बरको प्रदेश... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
नारायण खड्का दाङ, मंसिर २७
तुलसिपुर बजारदेखि ८ किलोमिटर पूर्व र घोराही बजारदेखि १६ किलोमिटर पश्चिममा रहेको विजौरी सम्वभतः जिल्लाकै सुन्दर ठाउँमा दरिन्छ। समतल र सुन्दर यही ठाउँमा संघीय नेपालको पाँच नम्बर प्रदेशको पहिलो प्रदेश बैठक बस्ने सम्भावना बढेको छ।
तुलसीपुर–घोराही सडक खण्डमा पर्ने यो भवन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ मा पर्छ।
त्यसैले यहाँ राजधानी बस्ने भवनको खोजि समेत भइसकेको छ। नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको छेवैमा रहेको केन्द्रीय आयुर्बेद विद्यापिठको यो भवन करिब २४ करोड लागतमा हालै निर्माण सम्पन्न भएको हो।
भवन निर्माण केन्द्रिय समितिका सदस्य माधव अधिकारीका अनुसार उक्त भवनमा १०६ कोठा छन्। भवनसँगै डिप बोरिङ पनि निर्माण गरिएको छ।
हालै निरम्ण सम्पन्न यस भवनलाई सम्भावित संसद भवनका लागि भनेर विद्यार्थी सार्न र अध्ययन नगराउन दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भनिसकेको जनता क्याम्पस विजौरीका प्राध्यापक समेत रहेका अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘भवन बनिसकेपछि निरिक्षणका क्रममा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले क्याम्पस प्रशासनलाई यहाँ विद्यार्थी नपढाउन आग्रह गरिसकेका छन्,’ उनले भने।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका लेखा अधिकृत नविन पोख्रेलले प्रजिअ श्रेष्ठ, राप्ती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी दिलिपकुमार चौधरी र दाङ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दुर्गा सिंह लगाएतको उच्च अधिकारीहरु केही दिन पहिले आएर क्याम्पस प्रशासनसंग नयाँ भवनमा विद्यार्थी नसार्न आग्रह गरेको जानकारी दिए।
सम्भावित राजधानी बस्ने भवनमा प्रदेश राजधानीको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने हुँदा तत्काल विद्यार्थी नसार्न र त्यस भवनवाट पढाई सञ्चालन नगर्न प्रजिअ श्रेष्ठको टोलीले क्याम्पस प्रशासनलाई आग्रह गरेको लेखा अधिकृत पोख्रेलले सेतोपाटीसँग भने।
तर, नवनिर्मित आर्युवेदको उक्त भवनमा झन्डै १५ दिन अघिदेखि विद्यार्थीले अध्यन गर्दै आएका छन्। ५ नं. प्रदेशको राजधानी बस्ने वा पहिलो बैठक बस्ने भवन त्यो बन्छ भने नेपाल संस्कृत विश्वविलालयले तत्काल विद्यार्थी अन्यत्र स्थान्तरण गर्न तयार रहेको लेखा अधिकृत पोख्रेल बताए।
नेसंविको विजौरी क्षेत्रमा मात्रै ३ सय ३६ विगाहा जमिन छ। दाङको देउखुरीमा १ हजार ३ सय २६ विगाहा जमिन छ । तर, नेसंविको देउखुरीको जग्गा भने सबै कब्जामा छ। माओवादी युद्वको समयमा यो जग्गा कब्जा भएको हो। तर पनि नेसंविले उक्त जग्गाको तिरो (कर) तिर्दै आएको छ।
लेखा अधिकृत पोख्रेलका अनुसार नेसंविले अरुको कब्जामा रहेको जग्गाको बार्षिक २ लाखभन्दा बढी तिरो तिर्दै आएको जानकारी दिए। त्यसैगरी नेसंवि मातहतकै जनता क्याम्पस विजौरीको सम्पत्ति १८ विगाहा छ।
पश्चिम विजौरी बजारमा अवस्थित यो क्याम्पस झन्डै ४ किलिमिटर पश्चिममा अवस्थित छ ।
नेसंविको भवनमा पनि राजधानी बस्ने चर्चा
केन्द्रीय आर्युवेदको भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेकै समयमा समनिकट पर्खाल जोडिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आकर्षक र अत्याधुनिक भवन पनि प्रदेश नं. ५ को राजधानी बन्ने चर्चा चल्दै आएको अर्का स्थान हो।
यो अत्याधुनिक भवनको वरिपरी ठूला पर्खाल छ । त्यस भित्र ठूलो बगैचा पनि छ । विभिन्न जातका बोट विरूवा यस भित्र छन् । तर सबै भन्दा धेरै बोट आँपकै छन्। सिजनमा यो बगैचा भित्रको आँप ठेक्कामा बिक्रि हुने गरेको छ। यो सुन्दर बगैचा भित्रको चिटिक्कै परेको भवन भने राजा विरेन्द्रको परिकल्पना निर्माण भएको हो ।
विजौरीमा संस्कृत विश्वविद्यालय राख्ने घोषणा राजा विरेन्द्रले २०४३ सालमा गरेका थिए। त्यही सालमै राजा विरेन्द्रले विजौरीमा आएर विश्व विद्यालयको स्मारिका उद्घाटन गरेका थिए। नेसंविको केन्द्रिय कार्यालयको भवनको सिलान्यास भने त्यसको एकाध वर्षपछि तत्कालिन शिक्षा मन्त्री दाङ निवासी परशुनारायण चौधरीले गरेको प्राध्यापकसमेत रहेका माधव अधिकारीले बताए।
नेसंविको केन्द्रिय कार्यालय निर्माण गर्न झन्डै ४/५ वर्ष लागेको उनले स्मरण गरे। यो अत्याधुनिक र सुन्दर भवन विक्रम सम्वत २०५० सालतिर निर्माण सम्पन्न भइ प्रयोगमा आएको हो। नेसंविले आफ्नो स्थापना दिवस २५ मंसिरमा मनाउँदै आएको छ। यही सेरोफेरोमै दाङको विजौरीस्थित नव निर्मित भवनमा ५ नं. प्रदेशको पहिलो बैठक बस्ने अनुमान गरिएको छ।
तयारी पनि त्यही रुपमा भइरहेको जानकारहरु बताउँछन्। दाङका सहायक निर्वाचन अधिकृत भुपाल भण्डारीले पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई दिनमै प्रत्यक्ष तर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्ने गरी गणकको व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। अरू बाँकी दुई दिनमा समानुपातिक तर्फको मत गणना गरि सक्दा झन्डै २४ देखि २६ गतेसम्म मत गणना सकिने उनले बताए।
तर, सम्वावित राजधानी बस्ने भवनको खोजि र पहिलो बैठक बस्ने स्थानको तयारी कहाँ भइरहेको छ? भनि प्रश्न गर्दा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले केही दिनमै सार्वजनिक हुने यो सवाल अहिले नै नसोध्न आग्रह गरे। ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट आन्तरिक तयारी गरिसकेका छौं। र म त्यसको बारेमा अहिले तपाँईलाई कुनै कुरा भन्न सक्दिनँ,’ प्रजिअ श्रेष्ठले भने,‘माथिबाट कुनै पनि आधिकारिक सर्कुलेशन आएको छैन। तै पनि लौ प्रदेश नं. ५ को पहिलो बैठक दाङमा बसाल भनेपछि वित्यास पर्छ भनेर मात्रै खोजि गरिएको हो।’
तर उनले मुख्य मन्त्रीदेखि आधा दर्जन हुँदै डेढ दर्जनसम्म मन्त्रीहरु अटाउने सक्ने क्षमतको भवन खोजी गरेको भने जानकारी दिए। दाङमा मात्र होइन नेपालगञ्ज, कपिलबस्तु र बुटवलमा समेत पहिलो बैठक बस्ने स्थलको खोजि भइरहेको भन्ने जानकारी आफुले पाएको श्रेष्ठले बताए। त्यसैले माथिको निर्णय नहुँदा सम्म र निर्देशन नआउँदा सम्म केही भन्न नमिल्ने उनको धारणा छ। ‘दाङ नै राजधानी बन्ने चर्चा चल्दै आएको छ, हामीले त्यसको लागि सबै तयारी पनि आन्तरिक रुपमा गरिसकेका छौं, तर माथिको निर्देशन पर्खेर बस्न बाध्य छौं,’ उनले भने ।
नेसंविको दुई तले भवन भित्र अति आकर्षक झन्डै ३० वटा कोठाहरु रहेका छन् । उद्घाटनको क्रममा त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गतको संस्कृत अध्यन संस्थान डिनको कार्यालय भन्ने नाम थियो । तर, २०६२/०६३ को आन्दोलन पछि यसको नाम परिवर्तन गरि नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय नामांकन गरिएको थियो।
२०४३ सालमा यो विश्वविद्यालय स्थापना पूर्व विजौरीमा ऐतिहासिक विद्धत्व सम्मलेन भएको थियो। जहाँ नेपाल र भारतका संस्कृतका ज्ञाताहरुको बीचमा छलफल भएपछि यहाँ संस्कृत विश्व विद्यालय स्थापना गर्न राजाले लगाएका थिए। राजा महेन्द्रको इच्छा मुताविक विजौरीमा उनका छोरा विरेन्द्रले विश्व विद्यालय स्थापना गरेको स्थानीय अग्रजहरु बताउँछन्।
नेसंविको बगैचा हाताभित्रै अर्को एउटा अत्याधुनिक भवन छ। २०५६ सालतिर निर्मित यो भवनमा हाल पुस्तकालय रहेको छ। यो भवनलाई पनि सम्भावित राजधानी प्रमुख बस्ने भवनको रुपमा चर्चा गर्दै आइएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २७, २०७४, १२:२६:३४
अर्थ र कृषि समितिको संयुक्त बैठक कोरम नपुगेपछि स्थगित
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रस्तावबारे छलफल सुरू
पक्राउ परेका विद्यार्थी रिहाइ नगरे विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्ने चेतावनी
प्रारम्भिक मतपरिणाममा राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढमा कंग्रेस अघि, भाजपा पछि पर्‍यो
विवाहपञ्चमी महोत्सवको सुरक्षा तयारी पूरा, सुरक्षाका लागि प्रदेश र केन्द्रबाट प्रहरी मगाईयो